Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Jarmalka Mesut Ozil Story Story Plus Xogta Warka Xadida
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'Jarmalka Zidane'. Dabeecadeena Mesut Ozil iyo akhbaaraha aan la isku qorin Xaqiiqooyinka waxay kuugu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay Mesut Ozil diiwaanka caawinta iyo cayaarida awooda laakiin dhowr ka mid ah noloshiisa ka baxsan garoonka dhexdiisa taas oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, bilaabi.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Nolosha Hore
Mesut Ozil wuxuu ku dhashay Oktoobar 15, 1988, Gelsenkirchen, Jarmalka oo loo yaqaan Mustafa Özil (aabaha) iyo Gulizar Özil (hooyo). Waxa uu ku dhashay cunugii ugu dambeeyay afar ilmood. Muhiimad ka badan, wuxuu ku dhashay aabe Muslim ah oo asalkiisu ka soo jeedo Turkiga. Tusaale ahaan, waa Jarmalka Muslim Jarmalka oo waalidiintoodu yihiin muhaajir. Waalidiinta waalidiinta ee Mesut ayaa u soo guuray dhulal iyo badweynta Turkiga ilaa Jarmalka si ay ugu noolaadaan nolol ka wanaagsan Jarmalka Ruhr ee warshadaha.
Mesut Ozil ayaa noloshiisii ​​ku bilaabay sidii ilmo ka timid guri aad u liita. Waxa uu ku dhashay xilligii Jaangoynta Jarmalka halkaasoo heerka shaqo la'aanta ee muhaajiriinta ay dhaaftay 70%. Waalidiintiisa waxay ku dhibtoodeen hal shaqo oo lacag la'aan ah mid kale si ay u sii wadaan qoyska. Xaafaddiisa soogalootiga waxaa lagu gartey dhaqdhaqaaq xaddidan oo kooban iyo dhowr guri oo guryo laga gooyey oo calaamad u ahayd saboolnimada.
Inkastoo ay caqabadahaani jiraan, Mesut ayaa go'aansaday inuu guuleysto. Wax walba oo uu gacanta u dhigo wuu fiicnaaday. Wuxuu ka bilaabay waxbarashadiisa si uu isku daydo inuu bilaabo kubadda cagta. Hase yeeshee, Mesut wuxuu kubadda cagta u isticmaalay inuu noqdo waddo ka baxsan faqriga.
Jacaylkiisa kubada cagta ayaa bilowday markii uu bilaabay inuu u ciyaaro goobta uu jecel yahay ee ku dhow guriga. Mesut Ozil oo da 'yar ahaa ayaa si aad ah loogu qasbay inuu kubad heysto. Markii la isku dayey, wuxuu ku qaadan lahaa guriga wuxuuna seexanayaa sariirta. Waxa uu sidoo kale ku qaatay waqti badan oo daawashada walaalkiis odaygu u qabtey isaga laftiisa.
Mesut Ozil Photo
Isagoo kordhay, wuxuu qaatay casharo badan oo kubadda gacanta lagu hayo oo ka yimid walaalkiis odayga weyn Mutlu kaasoo kaliya ku jeclaa kubada cagta ee munaasabadda ciyaarista. Mutlu marnaba ma rumaysn qof ka mid ah asalkiisa muhaajiriinta ka dhigi kara kubada cagta. Sida wanaagsan, Mesut Ozil oo ah xaafad socdaal ah (xaafad xaafad ah oo ku dhow 16,000 degganayaasha) weligeed laguma arki jirin inay tahay dhul beereed oo loogu talagalay ciyaartoy tayo leh.
Go'aanka uu ku gaaray guusha ayaa keentay sheeko guul leh oo dhiirigelisay qaranka Jarmalka. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo jeeda asal ahaan ajnebiga si uu caalamka uga dhigo.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Bilaabista Soccer
Mesut Ozil ayaa go'aansaday inuu kubada cagta siiyo sida ugu dhaqsaha badan isagoo ogaaday inuu ahaa hab sax ah oo looga bixi karo saboolnimada. Wuxuu bilaabay inuu ka qeyb galo kubadda iskuulkiisa, kadibna uu horumariyo xirfadihiisa kubada cagta oo uu weheliyo asxaabtiisa "Maymun Cage," (xero maxalli ah oo ku hareereysan dayrka) oo ku yaal xaafadiisa muhaajiriinta.
Waxay ahayd 'Daanyeer Daanyeer' in Ozil uu leeyahay xirfadihii hore ee kubbadda cagta ahaa. Tani waxay ku dhacday degmada Jarmalka Bismarck ee Gelsenkirchen. Mesut Ozil wuxuu joogi lahaa garoonka dhexdiisa 'maalin kasta ha noqoto qorrax, baraf ama roob', sida uu sheegay walaalkiis ka weyn Mutlu.
Waayo-aragnimada laga helay "Kubadda Cagta Cawl wuxuu kordhay fursadaha uu ku heli karo tijaabooyin guuleysi ah oo loogu talagalay koox weyn oo ka baxsan xaafaddiisa muhaajiriinta. Marka hore, wuxuu si rasmi ah ugu diiwaangashanaa kooxda kubadda cagta ee dugsiga hoose.
Mesut wuxuu ka soo hagaagay heerkiisa da'diisa ilaa hal qof oo qaan-gaar ah kaas oo tilmaamaya heerka kubadda koleejka. Dugsiga sare wuxuu ahaa kan ugu weyn Jarmalka oo ka badan ardayda 1,400. Wuxuu ahaa mid aad u sarreeya oo weli loo doortay inuu matalo dugsiga.
Joachen Herrmann, oo ah kuxigeenka madaxa dugsiga sare ee Ozil, wuxuu qeexayaa wiilka yar yar ee kubada cagta sida kubada cagta 'wax yar' autistic ', isagoo intaa raaciyay: 'Had iyo jeer waxaan dareemay dareenkeyga xitaa sariirta sariirta ayuu qaatay.'
Marka laga soo tago daaqada fasalka, Ozil wuxuu arki karaa Veltins-Arena, garoonkeeda garoonka Schalke. Dhalinyarada riyoodaa waxay leeyihiin sabab kasta oo uu maskaxdiisa u dhaafo. Sidoo kale tayada uu ka soo jeedo, dugsigu wuxuu xiriir la leeyahay kooxda Bundesliga.
Iskuulka Ozil ayaa waxaa ku dhacay kubada cagta. Inkasta oo uu ahaa, wuxuu sidoo kale ahaa mid caqli ku ahaa dugsiga. Manuel Neuer, goolhayaha Bayern Munich ayaa sidoo kale ku jira iskuulka. Waxa uu ahaa dhowr sano oo ka sareeya Ozil, halka Julian Draxler uu ahaa mid hooseeya. Benedikt Howedes iyo Joel Matip ayaa sidoo kale ka qalinjabiyey dugsiga. Iskuulku wuxuu ahaa mid si toos ah u socda. Waxay lahaayeen waxqabadyo badan oo tababaro ah, seddex kulan oo ka horeeya subaxa, saddex habeenkii iyo shan jeer inta lagu jiro dhamaadka todobaadka.
Ozil ayaa loo yaqaano arday la fasaxay, laakiin tababarka iyo maalmaha isbuuc ee uu shakhsi ahaan isbedelay. "Marka aan arko Mesut markii ugu horeysay, waa inaan fiiriyaa da 'da' ayuu yidhi Krabbe, macalin dugsi. 'wuxuu ahaa mid aad u yar, aamusneyn, ka soo horjeeda garoonka. Laakiin garoonka kubadda cagta wuxuu ahaa xiddigga weyn, ciyaaryahanka ugu weyn. Wuxuu foorari karaa laabtiisa si waxtar leh. "Waxa uu ahaa xiddigga ugu weyn ee kooxda."
Waxa ay aheyd jaamacada Gelsenkirchen oo Ozil uu garwaaqsaday inuu ku guuleysan lahaa kubada cagta. Wuxuu la dagaalamey waxyaabo badan oo shakhsi ah sida ugu dhakhsaha badan markii uu bilaabay aqoonsi badan. Waxaa loo maleynayay inuu yahay caruur aad u xishood badan garoonka.
Macallimiintiisa mar hore ayay dhigtaan "Mesut ma uusan aheyn arday la kulmi kara dad badan. Wuxuu had iyo jeer ahaa mid aad u xishood badan. Laakiin haddii aad ku aragtay garoonka, wuxuu ahaa qof kale, sababtoo ah halkaas ayuu ku qarxay. Sii isaga kubad, oo wuxuu noqon lahaa qof kale. "
"Waxa uu ahaa wax yar oo xajis ah, laakiin waxa uu garaaci karaa mitirada 25, si dhaqso ah ayuu u ciyaari karaa, waxaana uu saxiixi lahaa kubad walba". ayuu yiri tababaraha kooxda Ralf Maraun. Wuxuu sii waday ... "Wuxuu ahaa ciyaaryahan dhab ah oo kubad sameeya. Waxaan xasuustaa markii aan ku guuleysanay xajka 12 ee eber. Mesut wuxuu dhaliyey 10. Tababaraha kale ee kooxda ayaa iigu hor istaagay oo yiri, "Waqtiga xiga, fadlan ka tag waddada muhaajiriinta guriga". '
Koleejka, wiilka u soo guuray ee Bismarck ayaa noqday kan ugu caansan kubada cagta. Ma qaadan waqti dheer ka hor inta uusan ka diiwaangashan Jarmalka ee iskuullada halkaas oo uu helay aqoonsigiisa. Tani waxay u qalantay inuu ka qaybqaato tartan weyn.
Mesut ayaa saacado kasta oo firaaqo ah u hibeeyay inuu ku nasto hamiga nolosha. Kadib markii uu ku guuleystey, wuxuu sameeyay hal shay oo qof waliba wali xasuusinayaa isaga ilaa taariikhda. Taasi waa; la wadaagaan guusha uu kula yeeshay dadka jecel.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Nolosha Qoyska
Mesut Ozil's family ayaa bilaabay noloshiisa degmada Bismarck, Jarmalka. Tani waa xaafad ka mid ah Jarmalka oo inta badan deggan Migrant Turkiga.
Qoyskiisa wuxuu u guuray Turkiga ilaa Jarmalka si uu u noqdo shaqaale sanadka 1967. Sanado badan, waxay ku noolaan jireen faqri. Waxa ay aheyd Mesut oo kubadda cagta u isticmaalay inuu bedelo qadarka qoyskiisa. Wuxuu ahaa muwaadin Soomaali ah oo keliya oo qoyskiisa ka dhigtay inuu ku kici karo saboolnimo saboolnimo ilaa hanti aan la qiyaasi karin.
GABAAN: Mustafa Ozil waa Aabihii Ozil. Waa jiilka labaad ee Turkiga ah ee u dhoofay Jarmalka isaga oo aabihiis markii uu ahaa 6 sano jir.
Ka hor inta uusan shaqo ka bedelin ka dib markii wiilkiisa uu kubbada cagta ka sameeyay, wuxuu hore ahaan jiray shaqaale metal ah. Wuxuu bilaabay inuu noqdo nin iibiya (digaag) intii uu ku jiray dhalinyaro.
Mesut Ozil ayaa ogolaaday inuu aabihiis Mustafa noqdo inuu noqdo tababaraha ka dib markii uu kubada ka sameeyay. Arrintan ayaa ka dhigtay inuu iloobo shaqadiisa hore oo uu si buuxda u xoojiyo ganacsiga kubadda cagta. Waxa uu sameeyay lacag aan caadi aheyn oo ah wiilkiisa xirfadiisa.
HOOYO: Mrs Gulizar Özil waa hooyada Mesut Ozil. Waxay bilawday sidii xaas guri ah, oo masuuliyadeeda asaasiga ah ay ahayd in ay carqaladeeyaan carruurteeda. Waxaa lagu sharaxay hooyo nasiib u leh hooyadeed iyada oo labadoodaba la joogtey iyada oo ku taala xaafaddooda muhaajiriinta ee Jarmalka. Hooyo xoog leh oo ku xiran Mesut iyo Gulizar.
SIBLINGS: Mesut Ozil wuxuu leeyahay saddex walaalo; kuwaas oo ah Mutlu Özil, Nese Özil iyo Dugyu Özil.
Walaalkiisa weyn, Mutlu Ozil. Wuxuu ahaa ciyaaryahankii kubadda cagta kubada cagta kubada cagta ku soo ciyaaray ma ahan inuu sii wato xirfadiisa, lakiin wuxuu jecel yahay dadka xiiseynayay inuu daawado xirfadiisa kubada cagta. Wuxuu fursad u helay inuu mustaqbalkiisa ku riixo, laakiin marnaba ma rumaysneyn in uu heysto dalxiis Turkiga ah oo kubada cagta ka dhigi lahaa. Maanta, waxaa loo calaamadiyay Mesut Ozil inuu ku soo kabsado. Mesut ayaa kubad ka helay kubada cagta. Xirfadaha tartanka, labbiska, iyo cayaaraha oo dhan waxay asalkoodu ka soo jeedaan Buuul.
Mesut Ozil wuxuu leeyahay labo gabdhood oo ah da 'yarkiisa; Nese Ozil (midig) iyo Dugyu Ozil (bidix). Waxa ay labadoodaba soo jiitay indhaha ay ku hayaan Mesut Özil. Nese (farqiga midig) gaar ahaan mar hore ayaa lagu sharraxay sida Mesut's clone. Adiga, walaashiis Digeu oo degdeg ah oo gaaban ayaa aad ugu dhow. Walaalkoodu waxa uu u kici waayay hurdo darro ayaa bixiyay taageero badan oo maaliyadeed oo walaashiisa ah. Maanta, riyooyinkooda daba dheeraaday ayaa la kulmay.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Nolosha dib u noqoshada
Marka ugu horeysa, Mesut Ozil oo ku saabsan nolosha nolosha ayaa ah mid adag. Waxa uu dareemayaa inuu inta badan soo jiitamayo dumarka aan Muslimka ahayn ee aan doonaynin inay diinta diintiisa ku beddelaan, sidaas awgeedna u horseedda burburinta.
Bilowga ciyaarta, Mesut Ozil ayaa markale taariikh kugalay Anna Maria, kaasoo ah qaab ciyaareed Jarmal ah oo horey u guursaday ciyaaryahankii kubadda cagta ee Finland Pekka Lagerblom.
Ka dib markii ay la soo baxeen Ozil, waxay hadda la kulantay halyeey Jarmal ah oo loo yaqaan Bushido.
Mesut ayaa sidoo kale taariikhdiisu ahayd Aida Yespica, oo ah gabadha quruxda badan ee quruxda badan ee Miss Venezuela ee 2002.
Ozil wuxuu bilaabay inuu la hadlo Mandy Capristo, oo ah fannaani xirfad leh, laga soo bilaabo 2013 laakiin xiriirkoodu wuxuu ku dhammaaday 2014 kadib markii la soo sheegay in uu arkay haween kale.
Waxa uu dib ugu soo laabtay xiriirkiisa saaxiibadiis hore ee hore iyo heesaha caanka ah Mandy Capristo. Ururka shaqaalaha ayaa bilaabay November, 2015. Ka dib markii ay kala go'day waxay ogaadeen in ay ujeedadoodu tahay mid kale oo mar kale soo laabtay.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Aabaha Aabaha
Mustafa (Ozil aabihiis) ayaa loo yaqaanaa inuu xoojiyo. Wuxuu noqday wakiilka wiilkiisa July 2011. Mustafa ayaa dhowaan ka soo tagay doorka ka dib markii uu go'aansaday Ozil inuu u magacaabo walaalkiis Mutlu. Tani waxay aragtay bilowga xiisadda u dhaxeysa aabaha iyo wiilkiisa. Mustafa ayaa sheeganaya in Mesut saaxiibkiisa Mandy Capristo uu mas'uul ka yahay go'aanka wiilkiisa oo uu ku tuuray wakiilkiisa.
Tani waxay keentay waxa badanaa arkay sida naxdin leh. Aabihii, Mustafa ayaa sii waday inuu dacwo wiilkiisa kadib markii la ceyriyay.
Sida lagu sheegay warbixinta; "Mustafa Ozil ma ahan nin sahlan oo wax laga qaban karo. Waxa uu diirada saarayay Mesut wuxuuna ogaa inuu heysto tayo weyn. Wuxuu tagaa tababarka mid kasta, ciyaar kasta. Waxay noqotay xarun noloshiisa ka dib markii uu hoos u dhigo shaqadiisii ​​yarayd ee mashiinka qarashka ah si loo raaco mustaqbalka wiilkiisa. '
Aabihiis ayaa ka careysnaa in uu ka tagay isagoo ka tagay shirkada xayeysiinta Mesut Ozil maxkamad. Wuxuu dalbaday magdhow £ 495,000 khasaarahiisa. Mesut Ozil ma uusan la hadlin aabbihiis tan iyo markii uu sameeyay falkiisa. Aabaha iyo xiriirka wiilka oo la sheegay in uu mar uun xoog u lahaa burburkii dagaalka.
Kadib markii uu dalbaday dalabkiisa, qareenka Mesut Ozil ayaa sidoo kale dalbaday in uu ku laabto £ 800,000 aabihii wiilkiisa wiilkiisa uga soo kaxeeyay wax shaqo ah. Kiiska ayaa maxkamad la horgeeyay. Arrintani waxay heshay waalidiinta Mesut Ozil si ay ula jaanqaadaan hooyada kadib markii uu wiilka u hoggaansamay.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Muslimiin culus laakiin ...
Mesut Ozil waa Muslim. Gaar ahaan, waa nin diinta Islaamka ah, oo ka sheekeynaya Quraanka kariimka kahor inta uusan ciyaaraha ciyaaruhu ciyaarin. Isagoo ka hadlayay maalin kasta oo Berlin ku salaysan "Der Tagesspiegel", ayuu yiri Mesut, "Waxaan had iyo jeer ka akhriyaa Quraanka ka hor inta aanan ka baxin (garoonka dhexdiisa). Tani waxay iga caawineysaa inaan diirada saaro. Waxaan i duco iyo asxaabteyda ay ogyihiin in aysan iiga hadli karin inta aan ducadeyda ku jiro. "
Mesut Ozil oo u muuqda inuu yahay nin Muslim ah, ayaa ku adkaatay inuu soomo xagaaga. Tani waa sababta oo ah shaqadiisa kubada cagta.
Sidoo kale wuxuu akhriyaa aayaadka Quraanka inta lagu jiro heesta qaranka ee Jarmalka. Tani waa sababta oo ah ma heesi karo heesta qaranka.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Chess oo loo yaqaan 'Child'
Mesut Ozil wuxuu bartay sida loo ciyaaro chess iyadoo kor ugu kicinaysa xaafadaha muhaajiriinta ee Gelsenkirchen, Jarmalka. Sida kubadda cagta, sidoo kale wuxuu u guursaday Chess ilmo ahaan.
Wuxuu xubin ka ahaa kooxda kubadda cagta ee dugsiga iyo kooxda chess. Mesut ayaa sidoo kale xiiseynayay xisaabta dugsiga. Jacaylkiisa Chess iyo Xisaabtu waxay u jiheysteen habka fekerka ee deegaanka iyo cayaaraha awoodeed ee cayaaraha.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Waaridda
Taageerayaal badan ayaa weydiistay su'aasha; Mesut Ozil IMMORTAL? Taageerayaal badan oo ka mid ah taageerayaasha ayaa ka soo muuqday sawiradii Arsenal ee u egeyd taariikhda F1, Enzo Ferrari.
Xitaa dadkiisa ayaa aaminsan in Mesut Ozil uu yahay reexgalinta Enzo Ferrari. Shirkadda tartanka gawaarida ee Talyaaniga ayaa ku dhintay 14 Agoosto, 1988 - oo siinaya waqti ku filan oo loo marayo hannaanka dib u dhiska ka hor inta uusan Özil wax ku dhicin 15 Oktoobar, 1988. Aragtidan ayaa lagu taageeray macallimiintii Buddhist iyo Taoist, taas oo sheegaysa in nafta bini'aadanku ka baxayso wiilka oo dib loo dhiso ka dib dhimashadii. Tani waa sababta ay dad badan oo New Age ah u aaminsanyihiin in Enzo Ferrari, oo ah aasaasaha Ferrari, uu dib ugu soo cusboonaaday Mesut Ozil.
Dib-u-dhiska iyo wakhtiga safarka ee socdaalka ku saabsan celebs waa wax cusub.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Ma aha aadane
Caawimadiisu ma laha xuduud. Tani waa sababta dad badani aaminsan yihiin in uusan ahayn aadane. Mesut Ozil waxa uu arkayaa waxa ay dadka ku adkaato inuu arko. Sawirka hoose ayaa caddaynaya.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Charity
Mesut ayaa sidoo kale loo caleemo saaray munaasabadda maskaxeed ee uu maskaxda ku hayo isagoo ku deeqay lacago badan oo ururo badan oo samafal ah. Wuxuu ku guuleystey lacag dhan 2014 Koobka Adduunka oo dhan (qiyaastii USD 5, 00, 000) ee daaweynta qiyaastii 23 Brazilian carruurta.
Daaweynta qalliinka iyo daaweynta ayaa ku guuleysatay. Waxa uu sameeyay tan calaamad u ah mahadnaqa diiran ee dadka reer Brazil. Tani waxay qayb ka ahayd mashruuca BigShoe. Mashruucan wuxuu ku dhamaaday hindisaha kabaha isagoo hadiyad siinaya mid ka mid ah cunsuriyihii reer Brazil ee la daaweeyay kaasoo udhow inuu noqdo ciyaaryahan kubada soo socda.
Bishii Maajo ee 2016, Mesut waxa kale oo uu booqday xerada qaxootiga ee Zaatari ee Jordan waxaana uu saxiixay sawirro taageerayaal ah oo ku saabsan 80,000 oo barokacay qaxootiga Suuriya.
Waxa uu daryeeli jiray carruurtii ku barokacay dagaalkii sokeeye ee Suuriya. Özil wuxuu ku soo booqday xerada iyo sidoo kale inuu la ciyaaro caruurta, saxiixa sawirada iyo udiyaarinta jimicsiga kubada cagta.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheerOo ku saabsan ilaahiisa
Hadii aad aragto sawir ka mid ah Mesut Özil indhaha, waxaad arki kartaa a image ee qof qaba hurgumada Graves (aka cudurka qaaxada indhaha). Hase yeeshee, maaha mid ka mid ah xaalad noocaas ah.
Saddexda dhibcood ee naga dhigaya in aan ka fikirno Özil maahan cirib-ba'an oo xanuunsan waa:
Marka hore, indhihiisu ma soo bandhigaan wax kasta calaamad casaan ama Calaamadaha kalecaadi ahaan xaaladda.
Marka labaad, cudurka Graves waa xaalad meesha saameynta jireed ay inta badan yimaadaan oo tagaan, ama ay ku dhibaateeyaan darnaanta. Indhaha 'Ozil' ayaa ah mid aan caadi aheyn.
Ugu dambeyn, xaalad sida cudurka Graves lahaa waxyeellooyin sida aragti liidata, xanuun iyo xanuun, ama arag la'aan. Tani waxay noqon laheyd xirfadle xirfad leh oo ka ciyaara heerka ugu sareeya ee aan macquul ahayn.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheerBuugiisa
Buug ayaa loo qoondeeyay isaga. Waxaa lagu magacaabaa "Mesut Ozil Superstar". Tani waxay sameysay taageere taageere ah oo ku adkeystay magaciisa oo aan qarsoodi ahayn.
Mesut ayaa u jecel yahay waxaana uu qandaraaskiisa u saxiixay si uu u qoro mid kale oo ka mid ah weeraryahanada 'Gunning for Greatness'.
Mesut Ozil Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer Aaminaada iyo liiska guusha
(1) Iyadoo Arsenal ay ku guuleysatay FA CUP (2013-14, 2014-15, 2016-17) iyo FA Community Shield ee 2014,2015 iyo 2017.
(2) Real Madrid, wuxuu ku guuleystay La Liga (2011-12), Copa del Rey (2010-11) iyo Supercopa de España ee 2012.
(3) Werder Bremen, wuxuu ku guuleystay DFB-Pokal (2008-09).
Xiddiga Jarmalka, wuxuu ku guuleystay Koobka Adduunka ee FIFA (4) iyo UEFA European Under-2014 Championship (21).
WAXYAABAHA KALE EE DALKA
2009-2010 Hogaanka Bundesliga
2010 Taageerada Kubadda Cagta Adduunka
2011, 2012, 2013 iyo 2015 Ciyaaryahanka Jarmalka ee sanadka
XIUMX Fifa Koobka Aduunka ee Koobka Aduunka (vs Ghana)
2010-2011 UEFA Champions League oo caawisay Jose Mourinho iyo Real Madrid
2011-2012 La Liga kaalinta koowaad ee J.ose Mourinho iyo Real Madrid
2015-2016 Premier League oo caawiyey Arsene Wenger iyo Asal
2015-2016 Ciyaartaha Xilli Ciyaareedka Arsenal
2012 UEFA Best Player ee Abaalmarinta Yurub (booska 10th)
Ozil Mesut Juun 28, 2018 Markay tahay 1:39 pm
Honda Keisuke oo ka tirsan Japan ayaa u muuqata in uu sameynayo ganaax ah ciyaartoyda xirfadlayaasha ah ee heer caalami ah inta lagu jiro cudurka Grave.
Asu Oktoobar 25, 2018 saacadu markay tahay 5:24 pm
waa ciyaaryahan kubada cagta ah
Catherine Scoon Diseembar 29, 2018 saacadu markay ahayd 11:35 pm
Waxaad u egtahay taageere aad u jilicsan. Intaa ka sokow, wuxuu la kulmay Amine Gulse laakiin xaqiiqda ah isagu waa hubaal.
Aaron Ramsey Storyhood Story Plus Xogta Wanaagsan ee Loo Yaqaano